Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzirwa, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma.
Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzirwa, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma. Naizvozvo, chinyorwa ichi chinosanganisa iyo yakadzvanywa inoumbwa neBOPP / LDPE rinoumbwa firimu, matambudziko ehunhu anoitika mune yekucheka gadzira maitiro uye inoenderana pr ...
Mukuita kwekugadzira bhegi, dzimwe nguva bhegi yekuisa chisimbiso haina kunyanya kunaka. Zvigadzirwa zvinogadzirwa nenzira iyi hazvina kukodzera. Chii chinokonzera chiitiko ichi? Tinofanira kutarisisa kupisa kwekutema kupisa Iko iko kutora kudzora kwekucheka kwekucheka panguva yekugadzira bhegi, kana iyo tembiricha isiri ...
Nei kureba kwebhegi kwakasiyana panguva yekugadzira bhegi?
Mukuita kwekugadzira bhegi, dzimwe nguva kureba kwemapurasitiki epera kwakasiyana. Zvigadzirwa zvinogadzirwa nenzira iyi hazvina kukodzera. Chii chinokonzera chiitiko ichi? Isu tinofanirwa kuteerera kune akakodzera mashandiro eiyo bhegi kugadzira muchina kubva kune anotevera maficha ekudzivirira iyi mhando ...